Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana ny Cleopatra | Kirsten Gillibrand-NY Etazonia senatera - Reincarnation Research
Mikaroka momba ny Reincarnation an'i Cleopatra
Hatramin'ny nanombohako niara-niasa tamin'i Kevin Ryerson tamin'ny 2001, ary taorian'ny nanombatako ny fanombanana fa ny mpitarika fanahy iray izay alefany, izay Ahtun Re no anarany, dia manana fahaizana manao lalao marina taloha, nanontany tena aho raha Cleopatra dia nihahery tamin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Nandritra ny taona maro izay dia nanontany an'io fanontaniana io momba an'i Ahtun Re aho, saingy nolaviny foana ny hanambara ny maha-izy azy an'i Cleopatra. Niova ity tamin'ny faran'ny volana Oktobra Oktobra 2013, rehefa nilaza tamiko izy fa Cleopatra dia mpanao politika vehivavy ambony sy ho avy any New York State, izay fikajiana ara-bola nefa mandroso amin'ny resaka sosialy.
Ny fisehoan'ny Reincarnation an'i Cleopatra dia nisongadina
Raha ny filazan'ny angano dia hatsarana lehibe i Cleopatra, nanontany aho raha toa ity fanomezana mpanao politika ity koa. Ahtun Re dia nilaza fa vehivavy mahafatifaty i Cleopatra ankehitriny, fa ny faharanitan-tsainy no fananany voalohany.
Taorian'ny fikarohana ny mpanao politika tanora any New York State, Kirsten Gillibrand niseho ho mety ho mpilatsaka hofidina. Tamin'ny fivoriana manaraka niaraka tamin'i Kevin, Ahtun Re dia nanamafy fa Gillibrand no reincarnation an'i Cleopatra.
Parallels anelanelan'i Cleopatra sy i Kirsten Gillibrand
Rehefa nanontaniako aho hoe inona no mitovitovy amin'ny Cleopatra sy i Kirsten Gillibrand, nitantara i Ahtun Re fa nanitatra ny sarin'i Cleopatra ho toy ny mpamitaka ary nohamaivana ny fahaizany. Cleopatra dia niaraka tamin'i Julius Cesar sy Mark Antony noho ny antony ara-politika, toa ny firenen'i Eropa matetika dia nanao fanambadiana natao noho ny antony politika. Ny fanambadian'i Louis XVI sy Marie Antoinette dia ohatra iray amin'ny fanambadiana voalamina izay noforonina ho amin'ny firaisankina politika.
Ahtun Re dia nilaza fa niaraka tamin'i Julius Cesar sy Mark Antony i Cleopatra noho ny antony mitovitovy ary manokana amin'ny fomba hijanonan'i Ejipta ho firenena mahaleo tena ary tsy ho fanjakana vazaha Romanina.
Amin'ny vanim-potoana ankehitriny, dia mino izy fa i Gillibrand dia hampiroborobo an'i New York ho fanjakana mandroso ara-tsosialy izay tompon'andraikitra amin'ny fomba ara-trondro, izay mety ho modely ho an'ny firenen-dehibe hafa an'ny Union.
Tsidiho: Kirsten Gillibrand-Senatera Etazonia
Mino aho fa ny Ahtun Re dia nandà tsy hilaza amiko ny mombamomba an'i Cleopatra ankehitriny amin'ny 2001 satria noheveriny fa ho malina izany mba hamela an'i Ms. azy.
Raha ekena io raharaha io dia afaka mijery ny tena endrik'i Cleopatra isika. Ankoatr'izay, raha ekena, ity tranga ity dia maneho ireto manaraka ireto:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Manana laza malaza amin'ny maha vehivavy tsara tarehy i Cleopatra ary manintona ihany koa i Kirsten Gillibrand. Raha ny marina, ny sokajy fikarohana Internet iray hita ao ambany dia ny hoe "Senatera mafana indrindra." Mazava ho azy fa mety manana loko mainty kokoa i Cleopatra, fa ny firafitry ny taolana kosa dia mijanona ho tsy miova, raha tsaraina amin'ny fampitahana ny sary sokitra ny tavan'i Cleopatra sy ny sarin'ny Senatera Gillibrand voalaza etsy ambony.
Ny fiainana taloha talenta: Cleopatra no mpitondra ara-politika farany, na i Faraona, avy any Ejipta fahiny. Kirsten Gillibrand dia senatera amerikana mampiseho ny State New York.
Ny fiovana amin'ny finoana, ny tanindrazana, ny fifanolanana ara-poko: Ejypop Cleopatra dia nanaraka ny finoana ara-panahy Ejiptiana, fa i Kirsten Gillibrand dia teraka tany Albany, New York ary Katolika.